Ngaphakathi Nendlu Noma Ukuxoshwa? I-Semalt Yabelana Ngamacebiso Awusizo Kubaphathi Bokukhangisa Ku-intanethi
Abantu abanomthwalo wokumaketha online bangase bazibuze ukuthi iyiphi indlela engcono kakhuluukwenza i-SEO eqinile. Ukufunda amasu we-DIY kungaba indlela enhle kodwa eshibhile, kodwa kungekudala kungabhekana nobungozi bokungabikhoukuhlangana noma ukugcina ikhono elidingekayo. Lesi simo siletha isidingo sokufaka umuntu wesithathu emikhankaso yakho ye-SEO. Iumuntu wesithathu angaqasha uchwepheshe oqeqeshiwe ukuze akusize nge-intanethi yokumaketha noma ukuya eqenjini elihloniphekile le-SEOisipho esihle kakhulu sokubeka iwebhusayithi yakho kuwebhusayithi.
Ayikho indlela yomlingo noma ukuthinta kungenza isiqiniseko siphumelele kunoma iyiphi insimu - curso postproduccion fotografia. Yonke inthanethiIzidingo zokuthengisa zihlukile. Izingxenye ezehlukene zokumaketha kwe-intanethi zingasebenza kahle ngendlela ye-DIY kanti ezinye ziyingqayiziveleuma kwenziwa uchwepheshe. Kwezinye izimo, amafemu we-SEO anedumela angase abe nesisetshenziswa. Ezinye izindlela eziye zaba khonaimpumelelo ihlanganisa inhlanganisela eyodwa noma ngaphezulu enezinhloso ezahlukene.
URoss Barber, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ihlanganise uhlu lwamathiphu angu-3 angaba usizo kumkhankaso wakho wokumaketha online:
1. Ibhajethi nezindleko
Kubalulekile ukucabangela ukuthi umsebenzi wonke uzodinga ukuthi kungakananiendlini noma ngaphandle. Isikhathi esisodwa ekulinganiseni singaphumeleli isikhathi nokhathala. Isikhathi simali, futhi kunjalo nakuweukubandakanyeka nokukhathazeka..Ukukhuluma ngokuzenzekelayo, ukukhipha imali kungabiza futhi kungadinga imali eyengeziwe kunokukwenza ekhaya. Ngokubaisibonelo, isabelomali esingaphansi kuka-300 USD angeke sithembise impumelelo uma sithunyelwe ngaphandle. Ukushayela ngokuqinile imali engu-5000 USD yonyaka ophelele / ngonyakaUhlelo luyimali yezinga lokungena e-United States. Ukuphathwa kwethimba lendlu noma ngisho nabasebenzi abaholiwe emsebenzini ofanayo kungadinga okungaphezuluizimali.
2. Imodeli yebhizinisi
Inkampani encike ngokuphelele kwi-intanethi ukuze amakhasimende adingeukuqeqeshwa okunye ekhaya kanye namathiphu wokusebenza. Isibonelo, ibhizinisi lakho lingenza izibalo ezinkulu njengezigidi zamaRandi. Lokhuibhizinisi ingaba isethaphu esibucayi esingadinga ukuthi umlawuli abe nolwazi kumacebiso we-SEO. Ngakolunye uhlangothi, inkampani eyenzayoakuxhomeke kwi-intanethi ngokuphelele yokuthengisa kungadinga ithimba langaphakathi.
3. Ukutholakala kwezinga elidingekayo lobuchwepheshe
Uma ukhetho lwendlu ngukukhethwa kwakho, kunesidingo sokufundaukwandisa ubuchwepheshe bakho. Esinye isidingo singaba uhlobo lomsebenzi oluhambisana nezidingo zakho ze-SEO. Inkampani ethembisa ukwenza SEOngoba kufanele ube nokukhishwa komsebenzi okufana nomgomo wakho wokukhangisa ku-intanethi. Ukutholakala kochwepheshe abafanelekileI-level, ke-ke, isici esingaqaphela ukuthi ukudayiswa kwe-intanethi kuzokwenziwa ekhaya noma kusetshenziswe ngaphandle.
Ukukhetha phakathi kokungaphakathi kweNdlu noma ukukhipha injini yakho yokuseshaUkuthuthukisa (SEO) noma umsebenzi wokuthengisa i-intanethi kungaba ngumsebenzi onzima. Kungakhathaliseki ukuchofoza ngokukodwa noma ukuphathwa kwe-PPC, okuqukethweukumaketha, design web, ukuthengwa kwe-intanethi, journalism brand, ukumaketha mobile noma marketing imeyili, indlela DIY noma ukuqasha kungenzekayini oyifunayo. Nokho, ukukhetha akulula. Kuye ngezici ezifana nesabelomali / izindleko, imodeli yebhizinisi noma ukutholakalakobuchwepheshe obudingekayo, umuntu angakwazi ukuthola indlela engcono yokucabanga ngayo. Le mhlahlandlela ingakusiza ukunqumaindlela enhle noma inhlanganisela ukukuyisa emigomweni yakho yokumaketha ye-intanethi.